ချစ်သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ သီချင်းဆိုနေရင်း ခေါင်းခါလိုက်လို့ ဆံပင်မီးကျွမ်းသွားခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ) - Mckzone Daily
ချစ်သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ သီချင်းဆိုနေရင်း ခေါင်းခါလိုက်လို့ ဆံပင်မီးကျွမ်းသွားခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ)
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့Pop star အဆိုတော်ချစ်သူနဲ့အတူ ခရစ္စမတ်နေ့ကို သီချင်းဆိုရင်း ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေတုန်း သူမရဲ့ဆံပင် မီးကျွမ်းသွားခဲ့ပြီးနောက် အပျော်ပျက်သွားခဲ့ရပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံ Madrid မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၂၇နှစ်အရွယ် Sofia Ellar အမည်ရှိတဲ့ အဆိုပါအမျိုးသမီးဟာ ဘေးဖက်မှာ အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် ချစ်သူဖြစ်တဲ့ Alvaro Solerနဲ့အတူ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ခရစ္စမတ်နေ့ကို ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်က လူတိုင်းအတွက် ကံဆိုးစေသလို သူမအပေါ်ကိုလည်း ကံဆိုးသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲအရ Sofia နဲ့ Alvaro တို့ဟာ လှလှပပ အလှဆင်ထားတဲ့ သစ်ပင် နဲ့ အထူးသဖြင့် ဖယောင်းတိုင်ရှေ့မှာ သီချင်းဆိုနေခဲ့ကြတာပါ။
သို့ပေမဲ့ ဖယောင်းတိုင်ရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ Sofia က သီချင်းဆိုနေတုန်း ပဲပေးရင်း ခေါင်းကို နောက်လှန်လိုက်တော့ သူမဆံပင်တွေ မီးကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။Sofia က သူမအဖြစ်ကို မသိဘဲ သီချင်းဆက်ဆိုနေခဲ့ပေမဲ့ မီးပူလောင်ကြောင့် “ Oh My God !! ” လို့အော်ရင်း Alvaro ကလည်း အလျင်အမြန် မီးငြိမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့ သူမက ကင်မရာနောက် ပြေးသွားရင်း ရှမ်ပိန်ခွက်ကိုပါ တိုက်မိသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဝမ်းသာစွာနဲ့ Sofia က ၎င်းအဖြစ်အပျက်မှာ ဒဏ်ရာ မရခဲ့ပေမဲ့ သူမရဲ့ဆံပင်ကိုတော့ ၂ လက်မလောက် ညှပ်လိုက်ရမယ့်ပုံပါဘဲ ။ သို့ပေမဲ့ Sofia က ရယ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်အဖြစ် ပြောင်းကြည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမက အဆိုပါဗီဒီယိုကို “ 2019 က ငါတို့အခြေအနေကောင်းတယ် ၊ 2020 က ငါတို့မီးတွေထွန်းပြီး ဖန်ခွက်တွေ ခွဲတယ် ၊ hello 2021 ” လို့ ဆိုရင်း ဝေမျှခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းတော့ Sofia က သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ခရစ္စမတ်နေ့ကို ဖြတ်သန်းနေပုံ နဲ့ သူမရဲ့ follower 350,000 ကျော်ကိုလည်း ဆုတောင်းစကားဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ သူမရဲ့Pop star အဆိုတျောခဈြသူနဲ့အတူ ခရစ်စမတျနကေို့ သီခငျြးဆိုရငျး ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနတေုနျး သူမရဲ့ဆံပငျ မီးကြှမျးသှားခဲ့ပွီးနောကျ အပြျောပကျြသှားခဲ့ရပါတယျ။
သို့ပမေဲ့ ဖယောငျးတိုငျရှမှေ့ာ ထိုငျနတေဲ့ Sofia က သီခငျြးဆိုနတေုနျး ပဲပေးရငျး ခေါငျးကို နောကျလှနျလိုကျတော့ သူမဆံပငျတှေ မီးကြှမျးသှားခဲ့ပါတယျ။Sofia က သူမအဖွဈကို မသိဘဲ သီခငျြးဆကျဆိုနခေဲ့ပမေဲ့ မီးပူလောငျကွောငျ့ “ Oh My God !! ” လို့အျောရငျး Alvaro ကလညျး အလငျြအမွနျ မီးငွိမျးပေးခဲ့ပမေဲ့ သူမက ကငျမရာနောကျ ပွေးသှားရငျး ရှမျပိနျခှကျကိုပါ တိုကျမိသှားခဲ့ပွနျပါတယျ။
ဝမျးသာစှာနဲ့ Sofia က ၎င်းငျးအဖွဈအပကျြမှာ ဒဏျရာ မရခဲ့ပမေဲ့ သူမရဲ့ဆံပငျကိုတော့ ၂ လကျမလောကျ ညှပျလိုကျရမယျ့ပုံပါဘဲ ။ သို့ပမေဲ့ Sofia က ရယျစရာကောငျးတဲ့အဖွဈအပကျြအဖွဈ ပွောငျးကွညျ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။
Be the first to comment on "ချစ်သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ သီချင်းဆိုနေရင်း ခေါင်းခါလိုက်လို့ ဆံပင်မီးကျွမ်းသွားခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး(ရုပ်သံ)"